Eyona midlalo ifanayo kuMinecraft yekhompyuter | Iindaba zeGajethi
I-Minecraft ngokungathandabuzekiyo yenye yezona zinto zibalulekileyo kwihlabathi lemidlalo yevidiyo. Ngokugqithisa kakhulu Izigidi ezingama-200 zemidlalo ezithengisiweyo, ayimisi nto kwaye iphakathi kwezona zidlalwayo kuwo onke amaqonga afumanekayo. Olu lwakhiwo kunye nokudlala indima kumdlalo wevidiyo ubunathi iminyaka eli-11 kwaye ngenxa yomxholo wokuhlaziywa kwayo rhoqo, iba ngumdlalo ongafiyo osinika into eyahlukileyo ukuba siyidlale yonke imihla.
Kodwa kuthekani ukuba sidiniwe yile nto inye kwaye sifuna ukonwabela umdlalo owahlukileyo kodwa ngaphandle kokulahleka loo nto ihanjiswa nguMinecraft kuthi? Ewe, sinethamsanqa kuba ngenxa yempumelelo enkulu ephunyezwe nguMinecraft, sifumana inani elikhulu leemidlalo ezifanayo. Sifumana ezinye zigxile kwisenzo, kwicala le-RPG okanye kulwakhiwo. Kule nqaku siza kufumanisa ukuba yeyiphi imidlalo efana ne-Minecraft yekhompyutha.
2 Ihlabathi leCube
5 I-LEGO Worlds
6 Umhlaba omncinci
8 Elona lincinci
Umdlalo we-Multiplatform esinawo ukufumaneka kwi-PC, ngumxube olungileyo phakathi kweMinecraft kunye ne-RPG emsulwa. Inomhlaba omkhulu ovulekileyo ozele ziindawo kunye neenokhi kunye neekhenana zokuhlola, njengenkuthazo Inenani elikhulu lezinto ezinokuthi zenziwe ngokobuqu ukuguqula isimilo sethu sibe yinto eyahlukileyo nengaphindaphindekiyo.
Lo mdlalo ugxile kakhulu ekudlaleni kwi-Intanethi, ukubonelela abadlali ngezixhobo zokunxibelelana. Ubuninzi beenjongo kunye nohambo kugxile ekoyisweni kwiqela, ke kuyacetyiswa ukuba uyidlale nabahlobo okanye ufumane amaqabane phakathi kwabadlali abangaziwayo. Sifumana imingxunya enzima kakhulu okanye abaphathi ekubonakala ngathi ayinakwenzeka ukuba sizama sodwa, into esele yenzekile kweminye imidlalo yokudlala indima kwi-Intanethi.
Sifumana kwi STEAM mahala
Kulesi sihloko sifumana umhlaba ofana nalowo uMinecraft asinika wona, njengoko isihloko sibonisa, umdlalo usinika imeko apho sinokuhlola khona ngesantya sethu. Sifumana umohluko omkhulu neMinecraft, okona kubaluleke kakhulu kukuba kuphuhliso ulwakhiwo lwendalo alubalulekanga kangako, ukunika ukubaluleka ngakumbi kuphuhliso lweqhawe lethu kwisitayile seRPG esulungekileyo.
Njengayo nayiphi na i-RPG elungileyo, isimilo sethu siya kuhlala silinganisa njengoko sisusa iintshaba, eziza kusinika izakhono ezitsha, sixhobise iimpahla ezingcono kwaye sivavanye imephu. Sinokukhetha phakathi kweeklasi ezahlukeneyo, nganye ikhetheke okwahlukileyo. Into esiyibonayo nakweyiphi na i-RPG enjengeMiphefumlo eMnyama.
Singayifumana kwi STEAM nge € 19,99.
Omnye wemidlalo kuluhlu oluphefumlelwe kakhulu yiMinecraft, kakhulu ukuze sibabhide. Ubuhle buyafana kodwa Yiya kwisitayile esinyani ngakumbi nesingaphantsi kwepikseli. Oku kuqapheleka ngakumbi xa ujonge isibhakabhaka okanye amanzi. Kumdlalo weqonga sikwafumana ukufana okukhulu. Oomatshini bokwakha iqonga bayafana, nangona kule meko sinezinto ezintsha ezinje ngokwenza isizwe sethu esiza kukhusela ngaso ilali yethu.
Ekugqibeleni sinezinto ezininzi ezilungileyo nezingalunganga. Kwelinye icala sifumana ubuqhetseba kunye nokuhlola okusikhumbuza iMinecraft, kodwa kwelinye icala sifumanisa ukuba intshukumo esecaleni ilinganiselwe. Nangona kunjalo, indlela yokusebenzisana kunye nobunzulu bayo kusenza silibale ezo ntsilelo.
Singayikhuphela kwiwebhusayithi yabo.
Siqhubekela kumdlalo ohluke kakhulu kuleyo yangaphambili, kodwa lowo wabelana ngezinto ezininzi neMinecraft. Kule meko ngumntu wokuqala wokudubula (i-FPS) umdlalo obekwe kwihlabathi elenziwe ngeebhloko. Umdlalo usivumela ukuba senze kwaye siphephe iimephu kwaye sabelane ngazo kwi-intanethi nabanye abadlali kwihlabathi liphela. Amathuba okulwa awanakuphela kwaye angcono kunabo bonke, iqonga linokutshatyalaliswa ngokupheleleyo.
Kwelinye icala, isenzo sayo esifana kakhulu neminye imidlalo yolu hlobo, injongo kukususa iintshaba zethu. Sineendlela ezahlukeneyo zomdlalo, ezinjengokuphelisa, ukubanjwa kweflegi okanye iqela lesibini. Eyona nto intle kukuba sinokunxibelelana nendalo esingqongileyo, sinika ubunzulu obuninzi kumdlalo wevidiyo.
Singayifumana kwi STEAM nge € 4,99.
Ukuba sicinga ngeziqwenga ezimilise okwicube, akunakuphepheka ukucinga nge-LEGO, ke ayinakuphoswa kolu luhlu lubanzi. I-LEGO inayo zonke izithako zokuba yayiyiMinecraft yoqobo, kodwa ezi ziye zahamba phambili. Ukuphuhliswa kwehlabathi le-LEGO kufana kakhulu noko sikubonayo kuMinecraft. Sifumana umhlaba ovulekileyo apho singakha kwaye sitshabalalise njengoko sifunaUkuba izixhobo ziya kufana neLEGO.
Umdlalo wevidiyo unendlela ekwi-intanethi ukuze sigqibe amava ethu ngokwabelana nomdlalo nabanye abadlali. Kuyenzeka ukuba senze indalo yethu, kodwa sinokusebenzisa ulwakhiwo olumiselwe kwangaphambili okanye ezo zabelwe abanye abadlali. Ngaphandle kwamathandabuzo, umdlalo oza kuthandwa bobabini nguMinecraft kunye nabathandi beLEGO.
Singayifumana kwi STEAM nge € 29,99.
Ngalo mdlalo wevidiyo sinomnye umdlalo oxelisa ngokupheleleyo iMinecraft. Olona ncedo luphambili kulo mdlalo kukuba ngumdlalo isimahla kwaye singayithenga ngokuthe ngqo kwiwebhusayithi yayo, efumanekayo kuzo zombini i-PC kunye neselfowuni. Inobugcisa be-3D yekhathuni yee-avatars eziza kusivumela ukuba senze indalo eyonwabisayo kwaye siyonwabele kuseto lwayo olubanzi.
Inobuchwephesha esibubonayo kuwo nawuphi na umdlalo wolu hlobo, apho ukwenziwa kwezinto, ukuxinana kwezakhiwo okanye imihlaba kunye nokulwa nezidalwa ezahlukeneyo. Sifumana inani elikhulu lemidlalo emincinci, eminye yenziwe ngabanye abadlali kwi-intanethi, kunye neepuzzle kunye neendawo zokulwa apho sinokudubula nabanye abadlali.
Singayifumana kwi STEAM mahala
Iklasikhi ebisoloko isentengiso iminyaka emininzi ngombono ofana kakhulu nalowo unikezelwa nguMinecraft. I-Terraria ngumdlalo wehlabathi ovulekileyo obonelela nge-adventure yesenzo kwimilinganiselo emibini, mhlawumbi okokugqibela yeyona nto ibaluleke kakhulu esiyifumanayo neMinecraft. Kokunye sifumana ukufana okuninzi, njengokwakha, ukuhlola kunye nokulwa nabaphathi abahlukeneyo, sinokudala izixhobo ezomeleleyo ngakumbi nezixhobo.
I-Terraria inesikhonkwane imini nobusuku ukuze ukukhanya kukhanye kakhulu, iintshaba kunye nokulaliswa esibhedlele ngabalinganiswa bayo. Umzuzu ngamnye wosuku uya kufaneleka kuhlobo ngalunye lomsebenzi. Eyona inkuthazo inkulu kukwakha indlu yakho. Ngokwandisa nangokuphucula ukwakhiwa kwethu, ii-NPCs ezintsha ziya kuvela eziza kusinceda ekuphiliseni, baya kusithengisela izinto ezingcono, oku kuyakwenzeka ukuba sakha amagumbi aliqela anendawo elungileyo kunye nokukhanya.
Singayifumana kwi STEAM nge € 9,99.
Sinika enye yemidlalo engasebenzi kangako kodwa inxulumene ngokusondeleyo neMinecraft. Umdlalo wehlabathi ovulekileyo apho siqala khona kwihlabathi elenziwe ukusuka ku-0 apho siya kuba ngabo, ngokusekwe kwizinto zokuyila, baya kufumana oko kuyimfuneko ekwakheni ilizwe lethu lokwenyani. Eyona nto iphambili kulo mdlalo yinkululeko epheleleyo esinayo yokwenza konke esinokucinga ngako.
Njengeminye imidlalo kuluhlu, lo ngumdlalo ovulekileyo osimahla. Singa khuphela kwiwebhusayithi yomdlalo kwaye iimfuno zayo zigqithiswa ngokulula.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Ikhaya » Videogames » Eyona midlalo ifanayo kwiMinecraft yekhompyuter
Ukuphonononga isitayile se-Energy Sistem 3